MM Popular – Page 11 – News And Videos
” သူ့ချစ်သူလေးကို ကိုယ်တိုင် အလင်းပြလိုက်တဲ့ ရဲတိုက် ” . ချစ်လို့တဲ့ !
1 ဘု၇ား ဘု၇ား ယောက်ျားတိုင်း မသိသေးတဲ့ အံ့သြစရာ မိန်းမတိုင်းရဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံး လိင်ကိစ္စတခု ဖော်ထုတ်လိုက်ပြန်ပြီ..။ . အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ အပြည့်အစုံကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။၁၈အောက်တွေမကြည့်ရ…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုးထပ်ကြီးဘုရားဗေဒင်ဆရာအေင်ချစ်ပို ကောင်မလေးတွေကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ တအားဆောင့်လိုက်ရာ အမလေး…ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်…နာလိုက်တာ မောင်လေး ရယ်….မညှာမတာ ၀င်သွားဖြင့် အော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြတ်နိူး သည် သိသိသာသာပင် ခါးကော့ကာတက်လာပြီး စိန်မြင့် ၏ ကျောပြင်အားပွတ်သပ်ပေးနေသည်…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God !နာမည်ကြီးနေတဲ့ Gfattနဲ့ နန်းစုရဲ့ HDအပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. နှိပ်သာကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝကြွေသွားလိမ့်မယ်။မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ …
“ဇနီးကို အမြဲ စိတ်ရှည်ရှည်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတတ်တဲ့ ဦးလူမင်း” ဇနီးသည် မခင်စံပယ်ဦး ကတော့ အသည်းခိုက်တာပေါ့လို့စ်စ်စ်…… အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ-
ပရိသတျတှေ သဘောကအြားပေးရတဲ့ အနုပညာရှငျ မိသားစုတှထေဲမှာ မငျးသား လူမငျးနဲ့ ခငျစံပယျဦး တို့ မိသားစုလေးလညျး ပါဝငျပါတယျ။ ရုပျရှငျအစညျးအရုံးရဲ့ ဥက်ကဌဟောငျးတဈဦးဖွဈပွီး ထပျဆငျ့အကယျဆုရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ မငျးသား လူမငျးတို့ ဇနီးမောငျနှံဟာ ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစား အားကအြတုယူရတဲ့ ဇနီးမောငျနှံစုံတှဲတဈတှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ 1 ဘုရား ဘုရား အမှန်​အကန်​ချတယ့်​အတွဲတဲ့…..ချောင်းရိုက်အချစ်ဇာတ်ကြမ်း…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။….. ကောင်-းလိုက်-တာ-မောင်-ရယ်- လွတ်-လွတ်-လပ်-လပ်-လုပ်ရ-အောင်…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG ပြင်ဦးလွင်ပန်းခြံထဲမှာ ပေါ်တင်ကို ကြမ်းနေကြတာ…တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးအောင်ဆွဲနေတယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးမိုးကုတ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ သူဌေးဒါယိကာမကြီးတို့ရဲ့ လူမသိသူမသိဖောက်ပြန်နေမှု မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုဖိုင်……ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ ဘု၇ား ဘု၇ား ယောက်ျားတိုင်း မသိသေးတဲ့ အံ့သြစရာ မိန်းမတိုင်းရဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံး လိင်ကိစ္စတခု …
အခုလေးတင် ဘန်ကောက်ကနေဖုန်းဆက်ပေးလာတဲ့ သိန်း1000တန် Vipပေါက်ဂဏာန်း…ထိုးချိန်မှီအောင်မြန်မြန်ရှယ်ထားပါ…အာမခံပေါက်မည်။ကွန်မန့် vipရေးပြီးမှ နှိပ်ကြည့်နော်။
အခုလေးတင် ဘန်ကောက်ကနေဖုန်းဆက်ပေးလာတဲ့ သိန်း1000တန် Vipပေါက်ဂဏာန်း…ထိုးချိန်မှီအောင်မြန်မြန်ရှယ်ထားပါ…အာမခံပေါက်မည်။ကွန်မန့် vipရေးပြီးမှ နှိပ်ကြည့်နော်။ (1) ဘုရား ဘုရား သူမကို အထွတ်အထိပ်သို့ အမြန်ဆုံးရောက်စေနိုင်မည့် လိင်ဆက်ဆံပုံ “၄” မျိူး……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ၀တ်မှုံရွှေရည် နာမည်မကြီးခင်ကတဲ့……လုံးဝထင်မထားဘူး…….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်…………ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ဇရပ်ပျက်ကြီးထဲမှာ နားနေတုန်း လူတွေအရှေ့မှာ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ ထရံကြားထဲမှာပြီးသွားတဲ့ စုံတွဲချောင်းရိုက်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ “ကိုရဲ…နွယ် မနေတတ်တော့ဘူး…လုပ်ပေးပါတော့” “ကောင်းလား…နွယ်” “တအားကောင်းလို့ ခက်နေတာ…မြန်မြန်လုပ်တော့ကွာ”….“ကို ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်”…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. (2) ဘုရား ဘုရား အမှန်​အကန်​ချတယ့်​အတွဲတဲ့…..ချောင်းရိုက်အချစ်ဇာတ်ကြမ်း…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။….. ကောင်-းလိုက်-တာ-မောင်-ရယ်- လွတ်-လွတ်-လပ်-လပ်-လုပ်ရ-အောင်…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG ပြင်ဦးလွင်ပန်းခြံထဲမှာ …
ချမ်းချမ်းအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားကို နောက်ဆုံးတော့ ဘုဏ်းသိုက် ဝန်ခံလိုက်ပါပြီ
“ကျနော့်ကိုယ် ကျနော် ၀န်ခံတယ်.. နည်နည်းတော့ မာန ကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် အတ္တကြီးတာ မဟုတ်ဘူး၊ သူ့ကို ကျနော် ချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် အရမ်းကြီး သ၀န်မတိုဘူး။ သူ နဲ့ ကျနော်နဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို အတည်ငြိမ်ဆုံး အဖြေရှာနေပါတယ်။ 1 ဘုရား ဘုရား အမှန်​အကန်​ချတယ့်​အတွဲတဲ့…..ချောင်းရိုက်အချစ်ဇာတ်ကြမ်း…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။….. ကောင်-းလိုက်-တာ-မောင်-ရယ်- လွတ်-လွတ်-လပ်-လပ်-လုပ်ရ-အောင်…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG ပြင်ဦးလွင်ပန်းခြံထဲမှာ ပေါ်တင်ကို ကြမ်းနေကြတာ…တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးအောင်ဆွဲနေတယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးမိုးကုတ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ သူဌေးဒါယိကာမကြီးတို့ရဲ့ လူမသိသူမသိဖောက်ပြန်နေမှု မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုဖိုင်……ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ ဘု၇ား ဘု၇ား …
“မိန်းမခိုးရာလိုက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့မြှားနတ်မောင်ကြီး ပြေတီဦး ” ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့ဆုအိမ်စံနဲ့သူရိယတို့စုံတွဲလေး…..
1 OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးမှ အာဏာသုံးပြီးမုဒိန်းကျင့်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ ရွာကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်နင့်ဖွယ် ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်။စိတ်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါနော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာ၏ကြေညာချက်ကို သရုပ်ဆောင် စိုးသူရဲ့ယခင်ဇနီးဖြစ်သူက ပြန်လည်တုံ့ပြန်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကားမီးလောင်မှုမှာ သေဆုံးသူရဲ့အရိုးပြာအိုးကို အိမ်သယ်လာတော့ အိမ်ကလူတွေကို ပူးပြီးပြော……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဆုအိမျစံနဲ့သူရိယ တို့စုံတှဲလေးဟာ ပရိသတျတှေ အားကနြကေရြတဲ့ အနုပညာရှငျစုံတှဲလေးပဲဖွဈပါတယျ။ တဈယောကျ အပျေါတဈယောကျ နားလညျမှု အပွညျ့, မလြှော့သော အခဈြတှနေဲ့ လကျတှဲ ခိုငျမွဲခဲ့တာအခုဆိုရငျ(၁၁)လမွောကျခဈြသူသကျတမျးလေးရှိလာခဲ့ပွီပဲဖွဈပါတယျ။ စိတျတူကိုယျတူနဲ့ဝါသနာပါရာ အနုပညာ အလုပျခငျြးလဲ တူတဲ့အပွငျလြောကျလှမျး နကွေတဲ့အနုပညာ …
ပြည်သူ့အချစ်တော် ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှု…” ပြည်သူ့အချစ်တော် ထက်ထက်မိုးဦး ရဲ့ ငယ်ဘ၀ဖြတ်သန်းခဲ့ပုံလေးတွေ” လက်တလောမှာတော့ သာသနာ့ဘောင်မှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေလျက်ရှိတဲ့ ထက်ထက်ကို လွမ်းနေတဲ့သူတွေရှိမှာပါ.. အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ –
တဈခြိနျက တီဗှီဖနျသားပွငျပျေါမှာ စိုးမိုးခဲ့တဲ့ ကွျောငွာဘုရငျမ ဆိုရငျတော့ ထိပျတနျးမငျးသမီး ထကျထကျမိုးဦးကိုသာ မကျြမှနျးတနျးမိကွပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျထိ အနုပညာသကျတမျးဆယျစုနှဈတဈခုကြျောလာတဲ့ ထကျထကျ ဟာ ပွညျသူ့အခဈြတျောမငျးသမီးတဈလကျအဖွဈ ရပျတညျနဆေဲပါပဲ။ မိုးကုတျဇာတိဖွဈတဲ့ ထကျထကျကို မလေ(၈)ရကျနေ့ (၁၉၇၁)ခုနှဈက မန်တလေးတိုငျး မိုးကုတျမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့တာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ 1 OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးမှ အာဏာသုံးပြီးမုဒိန်းကျင့်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ ရွာကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်နင့်ဖွယ် ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်။စိတ်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါနော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာ၏ကြေညာချက်ကို သရုပ်ဆောင် စိုးသူရဲ့ယခင်ဇနီးဖြစ်သူက ပြန်လည်တုံ့ပြန်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကားမီးလောင်မှုမှာ သေဆုံးသူရဲ့အရိုးပြာအိုးကို အိမ်သယ်လာတော့ …
ချဲလ်ဂဏန်း(853)ကို ဒဲ့တစ်ကွက်ထဲ ပေးခဲ့တဲ့ ♥♥♥ ဆရာပါ အရင်ပတ်ကလဲ(823နဲ့ 234)ပေးခဲ့တာ သုံးကြိမ်ရှိပြီ အခုလည်းအပိုင် ကွက်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ ယူမယ်ဆိုLikeလုပ်ပြီးokမန့်ပြီး..shareလိုက်..နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
Oh My God သင်ဇာဝင့်ကျော်အိမ်သာထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာကြည့်လိုက် အံ့သြသွားစေရမယ်။18နှစ်ပြည်မှကြည့်ပါခင်ဗျာ…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ချစ်သူကို အလိုလိုက်မိတဲ့ ကျောင်းသူလေး ပြည့်တန်ဆာဖြစ်သွားပုံ အဆင့်ဆင့် (မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် Share ပေးပါ)…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ လူထုပရိသတ်အပေါင်းတို့ ရွှေမှုန်ရတီလေးပါသွားပြီနော်…..💕💕💕💕 ဘဲကြီးနာမည်က ထူးပိုင်အောင်ဆိုလားပဲ။မယုံရင်ဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားစေရမယ်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ OMG မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကောင်လေးနဲ့ အိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့မှာ သိစေနိုင်မယ့် လက္ခဏာများတဲ့…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ (4) OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးမှ အာဏာသုံးပြီးမုဒိန်းကျင့်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ ရွာကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်နင့်ဖွယ် ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်။စိတ်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါနော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ …
ပင်နီတိုက်ပုံဝတ်၍ နှာဘူး၊ ကြာကူလီတစ်ယောက်ပုံစံမျိုး သရုပ်ဆောင်ထားသဖြင့် ပါတီ၏ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် မြင့်မြတ်အား တရားစွဲမည်
ကောလိပ်ဂျပိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ပင်နီတိုက်ပုံဝတ်၍ အမျိုးသမီးငယ်များအား ကာယအိနြေ္ဒပျက်ပြားစေသည့် ဇာတ်ကွက်များဖြင့် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်မြင့်မြတ်အား ပုဒ်မ၈(စ)ဖြင့် တရားစွဲသွားမည်ဟု ဖျာပုံမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်ကျော်က ဆိုသည်။ 1 OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးမှ အာဏာသုံးပြီးမုဒိန်းကျင့်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ ရွာကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်နင့်ဖွယ် ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်။စိတ်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါနော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာ၏ကြေညာချက်ကို သရုပ်ဆောင် စိုးသူရဲ့ယခင်ဇနီးဖြစ်သူက ပြန်လည်တုံ့ပြန်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကားမီးလောင်မှုမှာ သေဆုံးသူရဲ့အရိုးပြာအိုးကို အိမ်သယ်လာတော့ အိမ်ကလူတွေကို ပူးပြီးပြော……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ အဆိုပါ သရုပ်ဆောင်ကွက်များမှာ ပင်နီတိုက်ပုံဝတ်၍ နှာဘူး၊ …
1 OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးမှ အာဏာသုံးပြီးမုဒိန်းကျင့်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ ရွာကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်နင့်ဖွယ် ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်။စိတ်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါနော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာ၏ကြေညာချက်ကို သရုပ်ဆောင် စိုးသူရဲ့ယခင်ဇနီးဖြစ်သူက ပြန်လည်တုံ့ပြန်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကားမီးလောင်မှုမှာ သေဆုံးသူရဲ့အရိုးပြာအိုးကို အိမ်သယ်လာတော့ အိမ်ကလူတွေကို ပူးပြီးပြော……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God သင်ဇာဝင့်ကျော်အိမ်သာထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာကြည့်လိုက် အံ့သြသွားစေရမယ်။18နှစ်ပြည်မှကြည့်ပါခင်ဗျာ…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ချစ်သူကို အလိုလိုက်မိတဲ့ ကျောင်းသူလေး ပြည့်တန်ဆာဖြစ်သွားပုံ အဆင့်ဆင့် (မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် Share ပေးပါ)…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် …
“ချစ်သူမောင်ကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ ရွှေမှုံရတီ” အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ အမြဲ ဖွင့်ဟပြောပြတတ်တဲ့ သူမကတော့… (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ..)
မငျးသမီးရှမှေုံရတီတဈယောကျကတော့ သူမရဲ့ ခဈြသူမောငျကို အရမျးခဈြတဲ့ အကွောငျးလေးတှေ ဖှငျ့ဟလာပါတယျ..။ အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့ အမွဲ ဖှငျ့ဟပွောပွတတျတဲ့ သူမကတော့ ယနေ့ ဖဖေျောဝါရီ(၉)ရကျနမှေ့ာလညျး သူမရဲ့ ခဈြသူမောငျကိုဘယျလောကျထိ မွတျမွတျနိုးနိုးနဲ့ ခဈြတဲ့အကွောငျးကို ရေးသားပွောပွထားတာ တှရေ့ပါတယျ..။ 1 Oh My God ! မိုးဟေကိုရဲ့ HDအပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. နှိပ်သာကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝကြွေသွားလိမ့်မယ်။မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အသက် ၁၃ နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်က ၅ လရှိနေတဲ့ ကျောင်းသူလေး သားသမီးကို ည စာကျက်ဝိုင်းမှာ ထားတဲ့ ကျောက်းသားမိဘများ သတိထားစရာ (Share ပေးပါ)……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား …
Previous 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 49 Next